Kedu ihe ga - eme CoreOS ugbu a ọ bụ akụkụ nke Red Hat? | Site na Linux
Kedu ihe ga - eme CoreOS ugbu a ọ bụ akụkụ nke Red Hat?
Isaac | | Noticias, Netwọk / Sava
La Uhie okpu nke CoreOS Ọ bụ otu n'ime ozi ọma na mmepe. N'ime nke a, yana Kubernetes, ha na-etinye Red Hat n'ọnọdụ dị mma ka ha bụrụ ndị isi na teknụzụ igwe ojii na ọgụ kpụ ọkụ n'ọnụ ya na SuSE, ụlọ ọrụ ọzọ dị ukwuu na-agba mbọ ịchịkwa na ngalaba ọkachamara. Ulo oru abuo a adighi eme nkwekorita na ihe ohuru iji nwewanye ike, asọmpi ma meju ndi ahia ha.
Ma ruo mgbe ahụ, CoreOS bụ ọrụ onwe ya ma ugbu a nzụta a gbanwere ihe niile. Kedu atụmatụ ga-eme n'ọdịnihu Red Hat nwere maka CoreOS? Anyị enwere ike ịga n’ihu n’iji ya n’onwe anyị n’enweghị zụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ Red Hat? Ekwenyere m na ngagharị a n'ahịa emeela ọtụtụ obi abụọ na ajụjụ si n'aka ọtụtụ, yabụ anyị ga-anwa itinye iwu. Mmetụta mbụ ọ ga - enwe ga - abụrịrị ebubo ngwaahịa Red Hat, nke ga - ahụ otu ọrụ a si esonyere ha iji melite ọrụ azụmahịa ha.
Uhie okpu CoreOS Ọ ga-anọchi Atomic ọbịa na Container Linux, na-arụ ọrụ dị ka otu akpa-centric usoro. Mana maka obodo ndị ọzọ ọ dị ka nsogbu agaghị enwe oke, ebe ọ bụ na a ga-enwe ụdị CoreOS nke ga-anọ onwe ya ma mebe ya n'ụzọ obodo, akụkọ na-ewepụtụ ntakịrị maka ndị niile chọrọ ọrụ CoreOS na-enweghị inwe dabere na ọrụ ụlọ ọrụ okpu uhie.
Nke ahụ bụ, ihe yiri ihe ọ bụ CentOS ma ọ bụ Fedora banyere RHEL. N'aka nke ọzọ, a ga-eji nwayọọ nwayọọ kpochapụ saịtị ahụ ma kpochapụ saịtị ahụ, mana ọ gaghị adị na mberede, koodu ahụ ga-adịgide ndụ na ebe nchekwa Red Hat. Container Linux ga-aga n'ihu maka oge ahụ. N'aka nke ọzọ, anyị makwaara na a ga-emekọrịta ugboro ole a ga - ewepụta nke CoreOS ọhụrụ na nke OpenShift.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Kedu ihe ga - eme CoreOS ugbu a ọ bụ akụkụ nke Red Hat?
Opera Nchọgharị: A Fast, Simple and Light Web Browser for Linux
Voyager Linux 18.04 GS LTS Ntinye ntuziaka